ကျော်ခ| January 15, 2013 | Hits:8,156
| | ဗုံးခိုကျင်းအနီးတွင် ကချင် မိသားစုတစုကို ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – လဖိုင် / ဧရာဝတီ)
အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် KIA တို့ ထပ်မံ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားကချင် နယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်ကေအိုင်အေနှင့် မြန်မာစစ်တပ် တိုက်ပွဲ ပြန်ဖြစ်၊ စစ်ဗိုလ် တဦး ကျဆုံးမြန်မာအစိုးရနှင့် KIA ယခုလအတွင်း ထပ်တွေ့မည်ကေအိုင်အေကို ဆက်တိုက်မည်ဟု ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် ပြော
မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 16, 2013 - 3:19 am အစိုးရ စစ်တပ်လို့ ရေးလို့ ဧရာဝတီကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြည်ပ မီဒီယာ အချို့နဲ့ ပြည်ပမှ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေက ဗမာစစ်တပ်၊ ဗမာတွေက တိုက်တယ် ပြောနေ ရေးနေတာ တွေ့ရလို့ စိတ်ထဲ မကျေလည်ဘူး။ သူတို့စွပ်စွဲနေတဲ့ မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒီတွေဆိုတာ ကျွန်မတို့ သာမန်ပြည်သူဗမာတွေ မပါ ပါဘူး။ မဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာလိုချင် မက်မောနေတဲ့ လက်တဆုပ်စာ လူမျိုးစုံပါတဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့သာပါ။ အမေရိကားမှာ ဆန္ဒပြသွားတဲ့ ကချင်တွေက ဗမာစစ်တပ် သုံးသွားလို့ ရေးတာပါ။ တကယ်က ဧရာဝတီက ရေးသလို အစိုးရစစ်တပ်က တိုက်နေတာပါ။ ဗမာစစ်တပ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
Reply jhmw January 16, 2013 - 1:29 pm The government is totally represented as Burmese and Burmese governors are also totally represented as they are government of the so called union of Burma. Other things are just minor. Maha Burmanization is not made by ordinary Burmese people and they even didn’t know about it. But it is made by the leading group of powerful Burmese politicians or governors. Yh..it is justahandful Burmese making the problems, but why the large number of majority of Burmese can’t stop them? It is seems the majority of Burmese (not all) are don’t like to beahunter and they might hate for hunting. But it is sure they like the meat which collected by the hunter very much.
Reply Lone Tin January 18, 2013 - 6:10 pm How about your homeless group(unfc)?Can stop them?Burmese is less then 50 % in Myanmar.And,they don’t have time to read news,no time to listen radio.And,they don’t care for kachin state.They prefer egg not jade.They Can’t care civilians die or any army.They try to survive them self hardly.Remember,just it isahandful people are reading news and writing comments.
Reply Sai Suriya January 16, 2013 - 5:24 pm No matter how hard trying to portray Burmese as innocent civilian is nothing but insincerity towards the truth. Please do more research . It is not fair to blame all those atrocities towards bamar lumyo but most majority burmese are culprit indirectly . The situation in Burma is more like colonization of Bamar towards ethnics area. The Panglong agreement is the only treaty , we all have to respect. Burmanization can be seen in all area. Education, eradication of culture , history and allocation of natural resources. If myanmar taiyin thu sincerely wants to have genuine,you will have to work harder to understand the situation instead of covering Bamar’s majority government wrong doing.
Reply ကောင်းစေချင် January 16, 2013 - 7:03 am ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် KIA ကပါးစပ်တောင်မဟပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ငြိမ်းချမ်းရေးယူမှာလဲ။
Reply rose January 16, 2013 - 4:38 pm ကောင်းစေချင်
Reply ko saw January 17, 2013 - 1:26 am ပါးစပ်ဟဖို့ရော်မင်းလူတွေကအခွင့်ပေးလို့လာ ဦးသိန်းစိန် အမိန့်တောင် နားမထောင်တာဘယ်သူလဲ အပြုတ်တိုက်ချင်တာကတော့သေချာသိသင့်ပါတယ် ဘယ် သူမှန်တယ်မှားတယ် မပြောဘူး နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သူက အရာရာမှာပိုသာပါတယ်
Reply Kyaw January 16, 2013 - 7:11 am I can’t read because you latter is block.
Reply Full Moon January 16, 2013 - 7:38 am Why don’t the Burmese delegates and we the ethnics debate at the UN? Naive international media might get the right knowledge of the history about the Union of Burma, not just about the Burmese.
Reply Mr Kian January 16, 2013 - 11:15 am I wantaquestion to UN , EU, USA , UK…some Big Pro-Human Rights and Democracy , why you people are just wactching , is time for must something action to Burma…? right now ,inaminutes, Innocent Ethnic Kachin People are Dies, Suffering Total Pains , Hungry, Homeless, Cold and Total Punish because of Rouge burma army…
Reply Wisperman January 16, 2013 - 11:41 am စစ်ပွဲတွေကို အမြန်ဆုံးရပ်ပါ။
Reply Myo Nyunt January 16, 2013 - 2:36 pm KIA ရဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင် တွေ သဘောထား တင်းမာနေ
Reply ပင်လုံ January 16, 2013 - 7:55 pm ခေါင်းမာတာက စစ်အုပ်စုကွ။ kia နဲ့ အပစ်အခတ်ရပ် လက်မှတ်ထိုးတာ ၁၇ နှစ်ရှိသွားပြီ။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရအောင် ပြောတော့အရပ်သားအစိုးရ တက်လာမှဆွေးနွေးပါတဲ့။ အရပ်သားအစိုးရယောင်ဆောင် စစ်အာဏာရှုးတွေ တိုင်းရင်းသား
Reply naing January 16, 2013 - 11:00 pm လိုင်ဇာကပြည်သူတွေပြောင်းရွှေ့ဖို့ အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးပြီး လိုင်ဇာကိုအမြန်သိမ်းပါ။ညွှိနှိုင်းခြင်းက စစ်ပွဲပိုရှည်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အပြီးသတ်စစ်ဆင်နွှဲပြီး ရယူရတာရှိတယ်။ Finish ပြီးမှ Peace ဖြစ်မယ်။
Reply ဖိုးလုံး January 17, 2013 - 3:17 pm ကြားထဲက ဒေသခံကချင်ပြည်သူတွေ မြေဇာပင်ဖြစ်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာအကောင်းဆုံးပါ။ လက်နက်ရှိတဲ့သူအချင်းချင်းပစ်ခတ်လို့သေကြတာထက် ကြားထဲကလက်နက်မဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေခံရတာကို အမိန့်ပေးနေကြတဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကသူတွေစဉ်းစားဖို့တော့ကောင်းတယ်။
Reply great one January 17, 2013 - 3:21 pm ကချင်ပြည်နယ် နေထိုင်သူတွေရဲ့ ဒုက္ခကို ကိုယ်ချင်းစာနားလည်ပါတယ်၊ အခုကိစ္စမှာ နှစ်ဖက်စလုံးက ကိုယ့်အတွက်ဘဲ ကိုယ်ကြည့်ဖြေရှင်းနေတာ သေချာတယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ တကယ်လိုချင်ရင် နှစ်ဘက်စလုံးအတွက် အလှမ်းမဝေးပါဘူး၊ တကယ်ရပါတယ်။
Replyု့khun January 17, 2013 - 11:47 pm ပြည်ထောင်စုသားချင်းတိုက်ခိုက်နေတာတွေရပ်တန.်ပါတော.